Ampangain’Ilay Mpandimby Azy Ho Mpanao Kolikoly Ny Filoha Angole Teo Aloha José Eduardo dos Santos · Global Voices teny Malagasy
Ampangain'Ilay Mpandimby Azy Ho Mpanao Kolikoly Ny Filoha Angole Teo Aloha José Eduardo dos Santos
Mpanoratra Dércio Tsandzana, Simão Hossi Nandika (en) i Dércio Tsandzana, nirinandrea
Voadika ny 16 Desambra 2018 6:12 GMT
Vakio amin'ny teny English, Español, русский, Ελληνικά, Italiano, Português
João Lourenço, Filohan'i Angola. Sary avy amin'i J.Barande, Sekoly politeknika/Flickr CC BY-SA 2.0
Hatramin'ny 2017 nahavoafidy an'i João Lourenço ho filoham-pirenena, nanontany tena ny amin'ny fifandraisany tamin'i José Eduardo dos Santos ireo Angoley.
JES, araka ny fiantson'ny maro azy ao an-toerana, efa nitondra an'i Angola nanomboka ny 1979 ka hatramin'ny 2017, fony i João Lourenço voafidy ho eo amin'ny laharana voalohany an'ny MPLA. Satria nahazo seza 150 ny MPLA nandritra ny fifidianana tamin'io taona io, mazava ho azy fa lasa filoham-pirenena i Lourenço. Ny volana Septambra 2018, lasa mpitarika ny MPLA koa i Lourenço.
Ny volana Novambra 2018 iny, raha iny nitsidika an'i Portiogaly iny, nilaza i João Lourenço nandritra ny tafatafa iray tamin'ilay gazety mpivoaka isan-kerinandro Expresso fa i JES (araka ny ahafantaran'ny maro azy ao Angola) nahita hoe foana ny tahirin'ny firenena tamin'ny fotoana nahatongavany teo amin'ny fanjakana.
Io no fizarana farany indrindra tamin'ny andianà disadisa teo amin'i Lourenço sy ny mpitondra teo aloha. Ny volana martsa 2018, nofoanan'i Lourenço ireo fifanarahana maro teo amin'ny fianakavian'i JES sy ireo orinasam-panjakana Angoley, fihetsika izay raisin'ny Angoley sasany ho toy ny tsy mifanaraka sy tsy firaharahiana ny zotra napetraky ny lalàna.
Tamin'ny herintaona, noroahany ny zanakavavin'i JES, Isabel dos Santos, tsy ho ao amin'ny fitantanana ilay orinasam-panjakana misahana ny solika, Sonangol. Nanokatra fanadihadiana momba ny kolikoly manenjika azy taminà resaka fanodinkodinam-bola ireo ao amin'ny fampanoavana .
Notanana am-ponja i José Filomeno dos Santos, anadahiny, izay filohan'ny tahirim-bolam-panjakana teo aloha ny volana Septambra 2018 noho izy voarohirohy ho nanao famotsiam-bola sy nanodinkodim-bola ary nanao hosoka. Mijanona am-ponja ihany izy eo ampiandrasana ny fitohizan'ny fitsarana.
João Paulo Ganga, ilay mpanadihady momba ny fiarahamonina sady mpanao fitsikerana miasa amin'ny fahitalavitra, dia nilaza fa be herimpo ary sahy ilay Filoha amin'ny nahavitany nanao izany fiampangana henjana izany an'ilay mpitondra teo alohany. Araka ny filazany, tokony hanao fanadihadiana lalina ireny fiampangana rehetra ireny ny Biraon'ny Fampanoavana (PGR).
Nitovy hevitra taminy koa ilay mpikatroka Joaquim Lunda :
Mbola mino aho fa afaka ny manatsara zavatra betsaka ny firenena ary amin'ny fomba fitondran'ny Filoha “ilay sambo”, afaka hanatratra ny fanantenana andrasantsika isika ary hoavy ho feno fahafahampo. Mbola betsaka ny zavatra tokony hatao, nefa tsy misy zavatra tsy ho vita izany.
Tiako ihany anefa ny hanome ny fisalasalana ho an'i João Lourenço ary mino aho fa nahavita niketrika “tsara” izy hatreto.
Ho an'ireo mpamadika firenena sy ireo te-handritra ny tahirim-bolam-panjakana, enga anie ho voatàna ho tompon'andraikitra amin'ny nataony izy ireo ary ho tehirizina anaty tantara ny saziny.
Nandritra izany fotoana izany, Tchizé dos Santos, ilay zanaka vavin'i José Eduardo dos Santos, no namoaka tao amin'ny kaonty sosialiny anaty aterineto fa hatramin'ny nandraisan'ny rainy ny andraikiny taorian'ny nahafatesan'ilay filoha Angoley voalohany, Agostinho Neto, ny taona 1970, no efa foana ny tahirim-bolam-panjakana.
Nilaza i Tchizé fa na eo aza ny fanambaran'i João Lourenço momba ny fahitana ny tahirim-bolam-panjakana efa foana, dia izy tenany mihitsy no nanao fitetezana tany lafo vidy, ary nanao fanavaozana tao amin'ny lapam-panjakana :
Araka izany … filoha iray mahita ny tahirim-bolam-panjakana efa foana no manofa fiaramanidina manokana lafo vidy indrindra erantany ary mandany vola an-tapitrisa dolara amin'ny asa fanavaozana goavana ao amin'ny lapam-panjakana. Moa ve tsy ny manatsara na ny manamboatra hopitaly fitsaboana no tsaratsara kokoa ampiasana ilay vola ? Na manatsara ny faripiainan'ireo dokotera manao fitokonana amin'izao fotoana izao ? Moa ve ny filoha vaovao mahay mandamina ny laharam-pahamehana noho ilay teo aloha?
Taorian'izany, nanao famoriana mpanao gazety tsy nampoizina i José Eduardo dos Santos tao an-drenivohitr'i Loandà mba hiarovany ny tenany amin'ireo fanamelohana ataon'ilay mpandimby azy, ary nilaza fa 15 miliara dolara no tao amin'ny tahirim-bolam-panjakana tamin'izy niala tao :
Tsy namela ny tahirim-bolam-panjakana ho foana aho rehefa niala tao. Tamin'ny Septambra 2017, fotoana niovan'ny filoham-pirenena, namela $ 15bn (£ 11bn) aho tao amin'ny Bankin-Tahirim-Pirenena (BNA)
Nandika (en) i Dércio Tsandzana
7 andro izayAngola